‘चटके’ले चलाएको देशमा जनता बन्न नसकेका हामी कार्यकर्ताहरु !
आज–भोलि चियापसल र सामाजिक सञ्जालहरुमा आरोप लाग्न थालेको छ, यो देशमा कालाबजारीहरुले समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन्, त्यो पनि सरकारकै संरक्षणमा । अब यो आरोपको दायरामा मात्र सिमित छैन, तितो–सत्यका रुपमा आम मानिसले स्वीकारीसकेका छन् । कालाबजारीहरुले सरकारकै संरक्षणमा चलाएको समानान्तर अर्थतन्त्रले दशकौँसम्म खुल्ला बजारलाई धक्का दिने जानकारहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा, एक असक्षम र अतिवादी नेतृत्वका कारण देश, राजनीति, अर्थतन्त्र सबै दशकौंँसम्म थला पर्न पुग्यो भन्ने निष्कर्ष अब पनि ननिकाले धेरै ढिला हुनेछ ।
पेट्रोल पम्पमा इन्धनको अभाव छ, तर सडकमा गाडी जाम छ । तेल कहाँबाट आउँछ ? सबका सब कालोबजारीले बेचेको तेल । तर, सरकार बेखबर छ । किनकी, यसको कनेक्सन सरकारसँगै छ । राज्यका सबै संरचनाहरुलाई कालोबजारको छायाँले गल्र्याम्मै अंँगालो हालेको छ । विचौलियाहरु राज्यका हरेक आयाममा बहुआयामिक ढंगले हावी छन् । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही विचौलियालाई खुसी नपारी काम गर्न सक्दैनन् । यसरी हेर्दा यहाँ नाकाबन्दी, कालोबजारी र इन्धन संकट सबै सुनियोजित लाग्छन्, बनिबनाउ लाग्छन्, कहीबाट सचेततापूर्वक डिजाइन गरिएका जस्ता लाग्छन् । किनकी, आन्दोलनकारीका विरुद्ध आगो ओकल्ने प्रधानमन्त्री र सरकार कालोबजारी र तस्करकाविरुद्ध चुक्क बोल्न सक्दैनन् । यस्तो किन भइरहेछ ?
भूकम्पबाट प्रताडित बयोवृद्ध र बालबालिकाहरु त्रिपाल र जस्ताको छानाको टहरामुनि लासको खात रुपान्तरण भइरहेका छन् । बाँचेकाहरु पनि मृतप्रायः र कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । चिसोले डसेर निलडाम परेका जनता राहत बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको भाषणमा बलात् मुस्कुराउनु परिरहेको छ । राष्ट्रपति विभिन्न भोजमा पैसा खर्च गरिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री बिजुली र ग्याँसका अपत्यारिला भाषण र उखान टुक्कामा सशुल्क मनोरञ्जन दिने चटकेको भूमिकामा छन् ।
टुँडिखेलमा चटक देखाउने मान्छेले पनि केही क्षण मनोरञ्जन दिन सक्छ, तर देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्दै राजनेताको भूमिकामा देखिनुपर्ने पात्रहरु नै जब चटकेको भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो देशको अवस्था कस्तो होला ? उत्तर छैन । तर, त्यही उत्तरभित्र जनताहरु निरीहतापूर्वक कष्टकर जीवन बाँचिरहेछन् !
अथाह पीडाको बीचमा पनि जनता चिसोले डामेर निलो भएका ओठहरु खोलेर हाँस्न बाध्य हुन्छन्, किनकी टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री देखिन थाल्छन्, रेडियोमा प्रधानमन्त्री सुनिन थाल्छन् ।
त्रिपाल र जस्ताका टहरामुनि तप्प–तप्प चुहिने सितको झटारोले जब पोलेको घाउमा नुन–खुर्सानीजस्तै बनेर हिर्काउँछ, आँखा झिम्केजसरी आउने बिजुलीले टेलिभिजन खुल्छ, रेडियो बज्न थाल्छ । अथाह पीडाको बीचमा पनि जनता चिसोले डामेर निलो भएका ओठहरु खोलेर हाँस्न बाध्य हुन्छन्, किनकी टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री देखिन थाल्छन्, रेडियोमा प्रधानमन्त्री सुनिन थाल्छन् । छेउ न टुप्पाका गफहरुले ल्याउने बलजफ्ती मुस्कान जनताको ओठमा लामो समय टिक्दैन, एनजिओको विकासजस्तै पुसको घाम बनेर झुलुक्क झुल्कन्छ र तताउन नपाउँदै अस्ताइहाल्छ ।
सरकारमा ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीदेखि ‘राष्ट्रवादी’हरुसम्म, ‘साधु’ चित्रबहादुरदेखि ‘धार्मिक’ ढकालसम्म सहभागी छन् । तर, सबका सब चटकेको चटकमा कम्मर हल्लाइ–हल्लाइ नाँचिरहेछन् । फगत दिन बिताइरहेछन् । जनताको चोटमाथि चोट थपिरहेछन् । झांगिँदो अन्धकार हटाउने एक धर्को उज्यालोको खेती गर्ने पक्ष र हैसियतमा कोही छैनन् । यहाँ अँध्यारोकै खेती भइरहेछ । किनकी निशाचरहरुलाई अँधेरो मन पर्छ । अँधेरोमा धेरै काला धन्दाहरु चलाउनु बर्जित हुँदैन । जनताको नाममा रातारात मालामाल हुनु अस्वीकार्य हुँदैन ।
भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कालाबजारी विष्णुमतिको मुलाजस्तै सप्रिरहेका छन् । जनता झन् कंगाल हुँदैछन् । देश झन्–झन् गरिब हुँदैछ दशकौंँ उठ्न नसक्ने गरी । बाँच्नेहरु कष्टसाध्य जीवन बाँचिरहेछन् । तर भावी पुस्तालाई समेत यही दुःख कष्ट र अन्धकार भविष्य हस्तान्तरण गर्दै पछुताउँदै मर्नुपर्ने अवस्था छ । अराष्ट्रवादीहरु चर्का स्वरमा राष्ट्रवादी भजन घन्काइरहेछन्, पटक्कै पत्यार नलाग्ने गरेर ।
कृत्रिम त आखिर कृत्रिम नै हुन्छ नि ! नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेजस्तै । उत्तेजना र भावनाको कुहिरोहरु कतिसमय टिक्छन् र ? तैपनि यहाँ यस्तै कुहिरोले ढाकिएका छौंँ हामी । यसरी नै शासित भइरहेका छौं हामी । अस्थायी मनोरञ्जनको लागि स्थायी खुसीको बलि चढाइरहेका छौं हामी । आखिर किन ?
किनकी, हामी यहाँ जनता जनता भएनौं । पहिला कार्यकर्ता भयौंँ, त्यसपछि मात्र नागरिक भयौंँ । वाद र विचारधाराका कैदमा थुनिएका हामीहरु यतिधेरै विवेकहीन भयौंँ कि पहिला नागरिक बन्नुपर्ने कर्तव्यलाई बन्धक बनाएर हामी पनि बनिबनाउ जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउने कार्यकर्ता भयौंँ ।
एकजना पत्रकारले रमाइलो प्रसंग सुनाएका थिए । उनले चुनावको बेला बुटवलका एकजना बुद्धिजिवीलाई फोन गरेछन् । चुनाव बाबुरामले जित्छन् कि विष्णु पौडेलले ? उनको सहज जवाफ थियो, ‘बाबुरामले चुनाव हार्छन् ।’ कारण रमाइलो थियो, यहाँ स्वतन्त्र मान्छे धेरै छैनन् । यहाँ पार्टीका मान्छे वा कार्यकर्ता धेरै छन् । बाबुराम चाहिने मान्छे हुन्, राम्रा मान्छे हुन् देशका लागि । तर म आफैं पनि एमाले कार्यकर्ता भएको हुनाले उनलाई भोट हाल्न सक्दिन ।
अब पनि कार्यकर्ताको साँघुरो पर्खालबाट मुक्त भएर सोच्न नसक्ने हो भने हाम्रो अवसान त्यही जेलभित्र हुनेछ जहाँ विवेक, वाद र सिद्धान्तको जेलमा बन्दी बनिरहेको हुन्छ । अनि अहिलेजस्तै चटकेहरुले शासन गरिरहेका हुनेछन् । त्यतिबेला भोको पेटमा चकटेको किस्सा र जादू हेर्दै, सुन्दै हाँस्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा सामान्य प्रसंगले हाम्रो अवस्थालाई उजागर गर्न सक्छ । यहाँ अमूक नेतालाई राम्रो वा नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । तर हामी कसरी कार्यकर्ताको रुपमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने एउटा विवेकशील मानवलाई बलात्कार गरेर बाँचिरहेका छौंँ ? हामीले भोगिरहेको वर्तमान एक–दुई व्यक्तिको मात्र गल्ती नभएर हाम्रो चेतना स्तर, संस्कार र संस्कृतिको उपज हो । नेतामा अग्रगामी चेतना हुनुपर्ने तर किन जनताभन्दा पछाडी परे यिनीहरु ? यसकारण किन अब पुराना नेताले होइन, नेताभन्दा अग्रचेत भएका जनताले वर्तमानको असंयोजनीय भद्रगोलता र जर्जर अवस्थालाई फेर्न सक्छ ? यी यक्ष प्रश्नबारे बहस र छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।
बहस र छलफल मात्र होइन, अब एउटा सार्थक निष्कर्षका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अझै हामीले ढिला गर्यौं भने हामीले आफ्नो जीवन मात्र होइन, सन्तान दरसन्तानको भविष्यसमेत ध्वस्त बनाइरहेका हुनेछौंँ । अब पनि कार्यकर्ताको साँघुरो पर्खालबाट मुक्त भएर सोच्न नसक्ने हो भने हाम्रो अवसान त्यही जेलभित्र हुनेछ जहाँ विवेक, वाद र सिद्धान्तको जेलमा बन्दी बनिरहेको हुन्छ । अनि अहिलेजस्तै चटकेहरुले शासन गरिरहेका हुनेछन् । त्यतिबेला भोको पेटमा चकटेको किस्सा र जादू हेर्दै, सुन्दै हाँस्नुपर्ने हुन्छ । समयद्वारा थिचिएर मर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबी र अभावको जाँतोमा पिल्सिएर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा अथाह स्रोत र साधनहरु कालाबजारी र तस्करहरुको कब्जामा हुनेछन् । तसर्थ, आउनुहोस्, चटकेहरुको पञ्जाबाट देशलाई मुक्त गरौंँ । स्वाभिमानी र विवेकशील नागरिक भएर बाँचौं । आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध देश बनाउन योगदान गरौंँ ।
कसरी भन्न सक्छौं नेताले बिगारे देश भनेर ? दोषी हामी हौं !
अम्बेडकरलाई सम्झिँदा उनको मूल सिद्धान्तलाई बिर्सन मिल्दैन
अमेरिकाको तेस्रो पुनर्निर्माण
हारसर बाँसघरमा मधेस मन्थन
अब जसपाले ‘ग्राउन्ड क्लियर’ गर्नुपर्छ
खेलकुद, विचार, साझापोस्ट सिफारिस
कतार फिफा विश्वकपमा सुन्दर खेलको कुरुप पक्षहरू
चरम दक्षिणपन्थ र उग्र वामपन्थ दुवैको लक्ष्य एउटै हुन्छ
सम्पादकीय, साझापोस्ट सिफारिस
अनैतिक सरकार, अनैतिक प्रतिपक्ष, अनिर्णयको बन्दी देश
अनुदारवादको आँधीः समकालीन विश्व व्यवस्था किन अधिनायकवादोन्मुख हुँदैछ ?
ओली–स्टालिनवादको अचानोमा त्रोतस्की–बुखारिनहरूको रोदन
विचार, विश्‍व, साझापोस्ट सिफारिस
चीन गर्व गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन
सीके राउत, विप्लव र आहुतिको नाममा
यसरी हुँदैछ भारतीय लोकतन्त्रको पतन
चीनको ‘बीआरआई’ पछाडिको राजनीति के हो ?
कति सम्भव छ ‘समाजवादी केन्द्र’ ?
दुरुपयोग नगरौं ‘सत्ताको चाबी’
राजनीतिमा व्यक्ति–पूजाको प्रवृत्ति
जसपा कुनै हालतमा ओलीतन्त्रको शिकार बन्न हुँदैन
राष्ट्रवादसँगको मोह र दक्षिण एसियाली युनियनको अवधारणा
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुः हिजो कस्ता थिए ? आज हामी कस्ता छौं ?
सरकार जोगाउन यस्तो छ बालुवाटारको हिसाबकिताब
काठमाडौं, ८ वैशाख । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेभित्रका विद्रोही धारलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्...
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले ईश्वरको नाममा सपथ लिए, राष्ट्रपति अनुपस्थित
काठमाडौं, ८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वयले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । सपथ लिने न्यायाधीशद्वयमा...
डेब्यु गरेकै साता कुशल भुर्तेल आइसिसीको टी-२० वरीयतामा अटाए
काठमाडौं, ८ वैशाख । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर कुशल भुर्तेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को टी-२० ब्याट्सम्यानको...
सभामुखविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
काठमाडौं, ८ वैशाख । संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाई...